१६ दिनदेखी सिताको शब अस्पतालको शव गृहमा, न्याय कुर्दै आफन्त ! « On Khabar
१६ दिनदेखी सिताको शब अस्पतालको शव गृहमा, न्याय कुर्दै आफन्त !
रुपन्देहीकी सिता भण्डारीको रहस्यमयी मृत्युको कारण खुल्न नसक्दा १६ दिनदेखी मृत शरिर लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको शव गृहमा छ । आफन्तीहरु कहिले प्रहरी चौकी त कहिले सिताको शव भेटिएको उनको आफ्नै घरमा भौतारिरहेछन, तर हालसम्म पनि कुनै कारण नखुल्दा शव अस्पतालबाट उठेको छैन् ।
भदौ २० गते पासो चुँडिएको अवस्थामा कफि कम्पनी स्थित घरको आफ्नै कोठामा मृत फेला परेकी थिइन्, सिता । पोष्टमर्टममा झुण्डिएर मृत्यु भएको देखियो । प्रहरीले रिपोर्टलाई आधार मानेर आत्महत्या ठह¥यो ।
तर, माइतिलाई प्रहरीको ठहर मान्य थिएन । उनीहरुले सीताले आत्महत्या गरेको नभई उनको हत्या गरिएको दाबी गर्दै छानबिनपछि मात्रै शव उठाउने माइती पक्षले अडान लिए । घरमा पति टिका पौडेल र उनकी दिदी विष्णु पौड्यालले हत्या गरेको आरोप लगाउँदै सिताका बाबु हरिप्रसाद भण्डारीले किटानी जाहेरी दिन इलाका प्रहरीमा गए । तर प्रहरीले आफ्नो ठहरबाट टसमस हुन मानेन र उनलाई फर्काइदियो । हत्याको जाहेरी लिन नमानेपछि बाबु हरिप्रसादले घरपक्षका टिका र विष्णुविरुद्ध आत्महत्या दुरुस्साहनको मुद्दा दायर गरेर फर्किए । “तर मलाई यो हत्या नै हो भनेर थाहा थियो । उनले आत्महत्या गर्नु पर्ने कुनै कारण नै थिएनन्,“ उनले भने ।
प्रहरीले हत्याको जाहेरी लिन नमानेपछि माइतिपक्ष आन्दोलनमा उत्रियो । तिजको लहर चलिरहेका समयमा सिताका माइतिपक्ष मृत्युको कारण पत्ता लगाउन प्रहरीलाई दवाव दिन हप्तादिन नै आन्दोलनमा उत्रिनु प¥यो। दवाद बढेपछि बल्ल सिताका पति टिका र उनकी दिदि विष्णुलाई प्रहरीले हिरासतमा लियो ।
बाबु हरिप्रसाद भण्डारीका अनुसार सीता र टीकाबीच २ वर्षअघि मागी विवाह भएको हो। विवाहपछि उनीहरू पाल्पा तानसेनमा दी दरबार रिसोर्ट नामको होटल सञ्चालन गर्दै आएका थिए। उनीहरू दुवै जना तीजलाई भन्दै ६ गते पाल्पाबाट घर तिलोत्तमामा आएका थिए। घरमा एक दिन बसेपछि सीता ७ भदौमा तिलोत्तमा–४ मा रहेको माइती गएकी थिइन्। मृत्यु हुनुभन्दा १ दिन अघि १९ भदौमा श्रीमान् टीकाले भतिजको जन्मदिन छ भनेर सीतालाई घर बोलाएका थिए।
“भतिजको जन्मदिन छ भनेर फोन गरेपछि १९ गते दिउँसो छोरी घर गएकी थिइन्,” सीताका बुवा हरिप्रसाद भण्डारीले भने ।
परिवारको दवावपछि घटनामा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी) संलग्न भएको छ । प्रहरीले घटनाबारे सत्यतथ्य छानबिन नगरेको आरोप लगाएका माइतिपक्ष सीआईबीको संलग्नताले आसावादी बनेका छन् । तर, मृत्युको वास्तविक कारण पत्ता नलाग्दासम्म भने शव नबुझ्ने उनीहरुले अडान कायमै राखेका छन् । सिताका भाइ सुरज भण्डारीले भने, “हामी कारण पत्ता लगाउन चाहान्छौं । घटनाबारे एउटा निष्कर्ष निस्किएपछि बल्ल शव बुझ्छौं ।“
इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख डिएसपी मदन कुँवरले घटनाबारे केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआइबी)ले अध्ययन गरिरहेको बताए । “अहिले मृतकको पति, पतिको भाइ र पतिको दिदिलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान शुरु गरिएको छ।,” कुँवरले बताए।